Shan arrimood oo madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay in uu si degdeg ah wax uga qabto - BBC News Somali
Waa la cusbooneysiiyay 22 Febraayo 2017
Farmaajo oo khudbad jeediyay ka dib markuu ku guuleystay xilka madaxweynaha
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullahi Farmaaji, shaqadiisa ugu horeysay ayaa ah inuu soo magacaabo Ra'iisl wasaare asigoo raacaya nidaamka 4.5 oo ah sida qabaa'ilada Soomaaliya ay wax ku qeybsadaan.
Ra'iisul wasaarahaas ayaa magacaabi doono gole wasiiro oo ka dib baarlamaanka ay ansixindoonaan. Halkaas ayeyna shaqada uga billaabaneysaa.
Farmaajo wuxuu ballan qaaday inuu soo dhisayo xukuumad fulisa barnaamijkiisa siyaasadeed ee ku saleysan "Nabad iyo Nolol".
Sida hay'adaha gargaarka ay sheegeen, Soomaaliya waxaa ka jirto cunno yari daran, deegaano badanna waxaa saameeyay abaarta.
Roobabkii deyrta ayaanan si wanaagsan uga di'in Soomaaliya, taas oo sii xumeysay xaaladda macluusha iyo gaajada oo si ba'an u saameysay caruurta.
Xilliguu uu ololaha ku jiray Farmaajo wuxuu sheegay in "Nolosha Soomaalida ay aad u liidato".
"Waxaa nalagu tilmaamaa wadanka ugu faqrisan. Waana wadanka ugu qanisan marka la fiiriyo khayraadka dabiiciga ah". ayuu yiri.
Xigashada Sawirka, AMISOM
"Dalkaan beec ma'ahan, dadkiisuna beec ma'ahan", ayuu yiri Farmaajo xilligii uu baarlamaanka la hadlaayay, doorashada ka hor.
Xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa ayaa wuxuu sheegay inuu is bedel ku sameeyay qeybaha dhaqaalaha, uuna mushaar u qoray shaqaalaha dowladda iyo xildhibaanada.
"Mushaarka ciidamada waa inaan loo arag hadiyad ee loo arkaan xaq ay leeyihiin. Waddo la xiraayo ma jirayso. Markaan Shabaab ka adkaano ayaan baabuurta ku raaxeysaneynaa." ayuu yiri xilli uu baarlamaanka la hadlaayay ka hor doorashadii maanta.
''Dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal, laakiin ma moodid in dowladda ay dagaal ku jirto. Dagaalka wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac. Shabaab baa wax weerarta, dowladdana waxay haysaa oo keliya tacsi iyo cambaareyn."
Wuxuu wacad ku maray, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, in dagaalka uu noqdo laba geesood. ''Waan isu tageynaa, hadey nabad qaataanna way fiican tahay, hadey diidaanna, shacabka, xildhibaanada, dowladda, kulli waan dagaal galeynaa".
Wuxuu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay u baahan yihiin daryeel si ay u ''dagaallamaan una hantaan amniga dalka".
Hadaba siduu wax uga qaban doonaa Farmaajo arrimahaasi: Wuxuu yiri "Siyaasaddu waa xal raadin ee khiyaano maahan, siyaasadu been ma'aha, siyaasadu ballan ka bax ma'aha. Aduunkana kama jirto, diinta islaamkana ma qabto inaad qof been u sheegto, ceeb weye."
Wuxuu intaa raaciyay "Barnaamijkeyga siyaasadeed oo aan hal ku dhig uga dhigay Nabad iyo Nolo, Soomaali intaas bey u baahantahay. Nabad ayaan u baahannahay, dad walaalo ah oo isku mid ah baannahay".
Sidoo kale, Waxaa la sheegaa inay jirto is fahan la'aan dhextaalla shacabka iyo ciidamada, balse Farmaajo wuxuu sheegay: "Ciidamada waxaan siineynaa tababar wadaniyad ah. Waxaan siineynaa tababar ah wadaninimada iyo arrinta ay u dhimanayaan waxa ay tahay".
8 Febraayo 2017
Doorashada Soomaaliya: tirinta codadka wareegga labaad oo billaabatay
Wiil PubG isku hilmaamay oo qoyskiisii oo dhan laayay iyo sabab layaab leh
Xog ku saabsan ninka keligiis ka badbaaday tahriibayaashii doonta la saarnaa
Maxaa ka jira inuu Farmaajo amray ciidammada Beledweyne laga dejiyay?
Maxay tahay arrinta lala yaaban yahay ee ku saabsan laadarkan Hindiga ah?
Muxuu Mareykanka uga walaacay diyaaraddiisii ku burburtay guriga Cusaama Bin Laadin
Hooyo Soomaaliyeed oo boqolaal dhagax jirkeeda laga soo saaray